နှစ်ပွဲကစား နှစ်ပွဲနိုင်ထားတဲ့လီဂါနက်စ် ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ပွဲ ဆက်ဖွယ်ရှိ
လီဂါနက်စ်က ရာသီအဖွင့် နှစ်ပွဲကစားခဲ့ရာမှာ အက်စ်ပန်ညိုအသင်းနဲ့ အလာဗက်စ်လို အသင်းကောင်းတွေကို နှစ်ပွဲစလုံးမှာ ဂိုးမပေးရဘဲ တစ်ဂိုးတည်းနဲ့ ကပ်နိုင်ပြီး ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ပွဲဆက်ထားလို့ အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် (၃) နေရာကိုတောင် တက်လှမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး အိမ်ကွင်းပွဲ ၂ဝ မှာ နှစ်ပွဲသာရှုံးတဲ့ ဒါဘီကိုရွေး
နှစ်သင်းစလုံးက ပွဲစဉ်(၅) ကစားအပြီး ခုနစ်မှတ်စီ ရထားနိုင်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဘီအသင်းက ကစားသမား အင်အားနည်းသော်လည်း ခုနစ်မှတ်ရထားနိုင်လို့ ပိုပြီးချီးကျူးရမှာပါ။
''အတ္တာဟိ အတ္တနောနာထော'' ဆိုသော ပါဠိဘာသာကို ''မိမိကိုယ်ကို ကိုးကွယ်အားထားရာ''ဟု မြန်မာလို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရပါတယ်။
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး တောင်ကျချောင်းရေများ စီးဆင်း
ပေါက် စက်တင်ဘာ ၇
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပေါက်မြို့နယ်၌ ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းခြင်းကြောင့် ပေါက်ချောင်းရေနှင့် ဆင်ဇာချောင်းရေတို့ တစ်ဟုန်ထိုးစီးဆင်းသဖြင့် ပေါက်မြို့ အနိမ့်ပိုင်း ရပ်ကွက်၌ ရေများ ဝင်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။
မြစ်ကြီးနား စက်တင်ဘာ ၇
ကချင်ပြည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူး၍ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင်ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုဇုန်းလွှာ ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ နံနက်ပိုင်းတွင် စက်ဘီးစီးပွဲတော် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြို့ပြစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ရန် မြေအသုံးချမှု ညှိနှိုင်း စည်းဝေး ကျင်းပ
တာချီလိတ် စက်တင်ဘာ ၇
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ယမန်နေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီက မြို့ပြစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ရန် မြေအသုံးချမှု ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။
ငှက်ဖျားရောဂါနှင့်ပတ်သက်သော အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ပန်းတနော် စက်တင်ဘာ ၇
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတနော်မြို့ အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ခန်းမဆောင်၌ မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်း(ဗဟို)မှ ဦးစီး၍ ဆေးဆိုင်ဝန်ထမ်းများအား ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲကို ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။
Tatmadaw provides relief aid with helicopters, motor vechicles and healthcare to displaced persons
Commander of Western Command Maj. Gen Maung Maung Soe and party today provided 392 Hindus taking shelter ataHindu temple in No.2 ward in ButhidaungTownship due to terror attacks by ARSA extremist Bengali terrorists in RakhineState, with foodstuff and personal goods donated by the families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers.
Likewise, security personnel transported relief aid for 194 local ethnics taking shelter at Sasanbeikman monastery in Maungtaw Township, 1,783 in Taungpyowel Village and 327 ethnics in Sinphyutaung Village with the use of Tatmadaw’s helicopters and cars.
Talk on Rakhine Issue: Discussion on Finding Solutions held in Yangon
ရေပန်းစားနေသော ပုဂံမြေမှ လက်ပန်းချီ
ပုဂံဒေသ၌ ပြီးခဲ့သည့် ရှစ်နှစ်ခန့်က စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကာ မြန်မာလူငယ်များသာမက နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည်များကိုပါ ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အပြင် ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေသို့ ဘုရားဖူးလာရောက် လည်ပတ်ကြသည့်သူတိုင်းလိုလို မိမိ၏ လက်ပေါ်တွင် ပန်းချီရေးဆွဲ အလှဆင်နိုင်သည့် လက်ပန်းချီမှာ ပုဂံနှင့်ဒွန်တွဲလျက်ရှိနေသည်ဟုပင် ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
Page 2037 of 2113